MALUNGA US - Coins nezikhonkwane Co., Ltd.
Ukubeka up ngo-2004, Siye baye banikezela ngokwawo ukuze kubonelelwe ngeendidi ezininzi izipho kubathengi bayo. ukuba izikhonkwane eqhotyoshelwa kwidlebe yobungcali, iingqekembe zesinyithi, keychains, ibhanti isiqhoboshi, seCufflinks efektri iminyaka engaphezu kwama-15, sithunywe ukuba ikhuphe imveliso zexabiso kubathengi bethu, hayi kuphela ixabiso kodwa esemgangathweni.
Siqwalasela lomgangatho njengoko ephambili yethu yokuqala, zonke iimveliso ukuba wenza inyathelo ngenyathelo phakathi kolawulo lwethu olungqongqo esemgangathweni.
odolo Bonke abathengi 'nje kuphela waqinisekisa umgangatho kodwa ekhuselekileyo kakhulu.
isebe lethu ulawulo esemgangathweni amandla ethu, zilawulwa ukuba liliso wonke inyathelo kuyo yonke le nkqubo ukuqinisekisa umgangatho kwakunye nenani.
Obathandayo kwi into esiyenzayo, abasebenzi bethu ukulungele ukubonelela ngenkonzo engcono umthengi kuwe! Kwakhona iintengiso abantu ukuba basebenze ngosuku okanye ebusuku ukuqinisekisa ukuba abaxumi kwindawo eyahlukileyo ukufumana impendulo ngokukhawuleza ukuba iikowuteshini zifuneka.
Qha ngoku ukuqalisa!